Chelsea Oo Looga Diyaar garoobayo Soo Dhoweynta Bakayoko Iyo Tegista Matic | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Chelsea Oo Looga Diyaar garoobayo Soo Dhoweynta Bakayoko Iyo Tegista Matic
(12-7-2017) Gudaha kooxda Chelsea ayaa laga dareemayaa abaabulka xafladda bandhigga ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tiemoue Bakayoko oo la filayo inuu heshiis u saxeexo maalmaha soo socda, isla markaana uu qayb ka noqdo safarka kooxdu ku tegayso waddamada China iyo Singapore Isniinta dambe.
Bakayoko ayaa la sheegay inuu u dhow yahay inuu qalinka ku duugo heshiis maadaama labada kooxood ee Chelsea iyo Monaco ay isla afgarteen lacagta ay ku kala iibsanayaan oo u dhaxaysa £35 milyan illaa £40 milyan.
Baadhitaanka caafimaadka ee Bakayoko ayaa dib loo dhigay markii la ogaaday in qalliin lagaga sameeyey jilibka dhamaadka xili ciyaareedkii hore, laakiin taasi caqabad kuma aha, waxaana uu tijaabada marayaa toddobaadkan.
Laacibkan qaybta weyn ka ahaa wacdarihii ay Monaco ka dhigtay Yurub iyo France xili ciyaareedkii tegay, ayaa waxay da’diisu tahay 22 jir, waxaana uu sannadkii hore ka caawiyey kooxdiisa inay ku guuleysato horyaalka Faransiiska oo ay ka qatanayd muddo 17 sannadood ah.
Tegistiisa Chelsea waxay daaqadda ka saaraysaa Nemanja Matic oo la filayo inuu ku biiro Manchester United oo toddobaadkan gacanta ku dhigtay Romelu Lukaku oo ay £75 milyan kaga iibsatay Everton.